Waa habsan goor dambe waana inaan runtii hurdaa. Laakiin anigu ma ihi. Waxaan ku eedeynayaa Google. Waxaan baaraya qaar ka mid ah xiriiriyeyaasha tixraacaya balooggeyga ku jira Google Analytics oo aan la kulmay: http://www.google.com/reader/view/
Waxaan go aansaday inaan arko waxa xiriirku yahay sidaa darteed waxaan ku tuuray baarkayga cinwaankayga. Waan ku faraxsanahay inaan sameeyay! Google waxay dhistay wax yar oo akhris ah oo ku saleysan websaydhka. Waxaan galiyaa dhammaan qoraaladayda dhammaan baloogyada aan maalin walba iska hubiyo. Google ayaa sameeya inta hartay. Waxay haysaa qoraalada aan akhriyay iyo kuwa aanan aqrin. Waxay sidoo kale ii ogolaaneysaa inaan calaamadeeyo quudintayda. Tani waxay ka badan tahay nidaamka kala-saarista quudintaada. Waxaad sidoo kale ku tuuri kartaa xiddig qoraallada aad runtii jeceshahay.